Ikhaya | Intsebenziswano yeMyCoolClass
IMyCoolClass yiUkubambisana kootitshala bamanye amazwe kunye neqonga labo lokufundisa nge-Intanethi. We xhuma Ootitshala abagqwesileyo kwihlabathi liphela kunye nabona bafundi banomdla kwindawo eyonwabileyo, evulekileyo nenenkcubeko. Yintoni egqithisile, wndinika ootitshala ithuba lokuba banendawo yabo yokusebenza.
Njengobambiswano lwabasebenzi, silandela imigaqo-siseko esixhenxe ebekwe yi-International Cooperative Alliance. Singo Ibhaliswe e-United Kingdom njengombutho kunye namalungu e-Co-operatives UK.
Joyina #UTITSHALA WENKCAZO NAMHLANJE
Nguwe umphathi. Ukhululekile ukuba ungazenzela ezakho izifundo ngendlela yakho. Ulawula ukubhukisha kwakho kunye neshedyuli kwaye ubeka amaxabiso akho.
Kulula ukulawula abafundi kwiqonga lethu lokufundisa.
Ukwabelana ngescreen, ulawulo lwefayile, ukusetyenziswa kwebhodi emhlophe, kunye nokulungelelaniswa kwezinto kulula kwaye zinomdla. Iqonga liyafumaneka ngeelwimi ze-10 ngoku kwaye ezinye zisendleleni!
Umvuzo ongcono, izibonelelo ezingcono kunye nokwenza izinto elubala ngokupheleleyo.
Ootitshala bahlawula i-19% yemivuzo yabo yenyanga kwi-cooperative. Oku kubandakanya iindleko zokusebenza kunye negalelo kwingxowa-mali ngokubanzi ukusinceda sikhule. Inxalenye ye-19% nayo iya kwikhefu lakho elihlawulelwayo! Asinabanini zabelo abasikiweyo. Njengelungu, ungumnikazi wenkampani nawe, kwaye ufumane elakho ilizwi ngokwenzekayo kuyo nayiphi na inzuzo.
Ootitshala baya kuqokelela iintsuku ezisi-7 ngonyaka zekhefu lokugula elihlawulelweyo okanye ikhefu lobuqu ngokwentlawulo yabo kunye nomndilili womvuzo wosuku Sifuna ootitshala bazikhathalele xa begula okanye bathathe iholide ngaphandle kokuphulukana nengeniso. Ungathatha kuphela into oyifakileyo.
Akukho zihlwayo okanye isohlwayo sokucima ukuba uyagula okanye unengxaki kaxakeka.
Izinto ezimbi ziyenzeka. Ukuba unengxaki yongxamiseko yosapho okanye ufuna ukuthatha iintsuku ezimbalwa ungabikho, vele urhoxise iiklasi zakho kwaye wazise iqela lenkxaso.
Nangaliphi na ixesha, nayiphi na indawo, naphi na
Iqonga lethu lisebenza naphi na apho ukhoyo kwaye naphina apho indlela ikuthatha khona. Konke okudingayo kukunxibelelana kwi-intanethi. Iqonga lethu liyasebenza nase China ngaphandle kwezithintelo.
Unceda ukwenza izigqibo ezibalulekileyo.
Utitshala ngamnye uya kuba nokufikelela kwiwebhusayithi yamalungu kuphela enikezelwe kwi-co-op, ngolwazi lwezezimali, imigaqo kunye nemigaqo, ulwazi ngonyulo, ukuvota kunye nokunye. Naliphi na ilungu linokubalekela iBhodi yaBalawuli.
Yenza kwaye usebenzisane
Qala okanye ujoyine iQela lokuDala kwaye uphuhlise iikhosi kunye nabanye ootitshala. Ngenisa iikhosi zakho ukuze zamkelwe yiBhodi yeKharityhulamu kwaye ke iQela lethu loYilo liya kuyenza ikhosi yakho iphile! Wena neqela lakho niyakufumana imirhumo xa ikhosi yakho ithengisiwe!
Nceda abo bayidinga kakhulu
IMyCoolClass iceba ukumilisela inkqubo yokubonelela ngesifundo simahla kubantwana abahlelelekileyo kwezoqoqosho ngokwenza ingxowa-mali engenzi nzuzo.
Flexible kunye nentlawulo efanelekileyo
I-MyCoolClass ineendlela ezahlukeneyo zokuhlawula ukuze uqiniseke ukuba uhlawulwa ngokufanelekileyo kangangoko.
Bonke ootitshala bamkelekile.
Ukuba ukulungele ukufundisa izifundo ozifundisayo, wamkelekile. Asikhathali nokuba ungubani, uvelaphi, uhlala phi, okanye uthetha luphi ulwimi. Ucalucalulo alupholanga kwaye alunandawo kwezemfundo.
Ukuba uyayithanda le nto siyenzayo kwaye ufuna ukubonisa inkxaso njengoko sikhula,
iyancomeka iminikelo yakho.
Iqonga labanini baka-Co-Op
Ewe kulungile !!! Bonke ootitshala baba ngomnye wabanini kwaye banesabelo kwinkampani. Njengomdibaniselwano, akukho "Big Boss" okanye abatyali mali abenza zonke izigqibo. Ilungu ngalinye linenxaxheba kwinkampani kunye nevoti elinganayo.
Intsebenziswano phakathi kweNtsebenziswano
Ukuthatha inxaxheba kwezoqoqosho
Ikhefu lomntu elihlawulelweyo
Akukho Migaqo-nkqubo yeDraconia
Faka isicelo sokuba nguTitshala
Incwadi yebrand kunye neLogo
© 2021 UMyCoolClass Co-operative Limited | Onke Amalungelo Agciniwe.
Ibhaliswe e-United Kingdom njengombutho obhalisiweyo phantsi komthetho weNtsebenziswano kunye noNcedo lweMibutho yoLuntu ka-2014. Reg No. 4790
XSisebenzisa ii-cookies kwiwebhusayithi yethu ukukunika amava afanelekileyo ngokukhumbula izinto ozikhethayo kunye nokuphinda utyelelo. Ngokucofa u "Yamkela konke", uyavuma ukusetyenziswa kwazo ZONKE iicookies. Funda OkuninziIzicwangciso ze Cookie Yamkela konke
Icookie sisiqwengana sedatha (ifayile yokubhaliweyo) ethi iwebhusayithi-xa ityelelwe ngumsebenzisi-ibuza umkhangeli wakho ukuba ayigcine kwisixhobo sakho ukuze akhumbule ulwazi malunga nawe, njengolwimi olukhethayo okanye ulwazi lokungena. Ezo cookies zisethwe sithi kwaye zabizwa ii-cookies zephathi yokuqala. Siphinde sisebenzise ii-cookies zomntu wesithathu- ezicookies ezisuka kwisizinda esahlukileyo kunendawo oyivakashelayo- kwimizamo yethu yentengiso kunye nentengiso. Nceda ujonge eyethu umthetho wabucala ukufunda okungakumbi malunga nendlela esizisebenzisa ngayo iikuki.
Sisebenzisa ii-cookies ngezizathu ezininzi ezinje;
ukusebenzisa izinto ezibalulekileyo kwiiwebhusayithi zeMyCoolClass,
ukuphucula amava akho usebenzisa i-MyCoolClass,
ukuqonda ngcono indlela abantu abayisebenzisa ngayo iWebhusayithi. Oku kunokubandakanya ikuki ezivela kwiwebhusayithi yomntu wesithathu kwimithombo yeendaba.
Ungalutshintsha useto lwecookie nangaliphi na ixesha ngokulandela imiyalelo emazantsi ephepha kwicandelo elithi "Lawula ii cookies zakho".
Iicookies zenzelwe ntoni?
Sisebenzisa ii-cookies kunye nezinye iitekhnoloji zokulandela umkhondo kwezi njongo zilandelayo:
Ukuhlalutya indlela abatyeleli ngayo, iwebhusayithi yethu
Ukuhlalutya ukuthandwa kweeklasi kunye nezifundo
Ukusinceda senze ukusebenza kunye nomxholo wokuphucula kwiwebhusayithi yethu
Ukulawula ukhetho lwakho lwecookie
Unokusebenzisa ukhetho lwecookie kwiwebhusayithi yeMyCoolClass, kwaye unokuba unqwenela ukulawula iicookies kuseto lwebrawuza yakho. Uninzi lwezikhangeli zewebhu zivumela ulawulo oluthile lweekuki ezininzi. Ukufumana okuninzi malunga neicookies, kubandakanya nendlela yokubona ukuba zeziphi iikuki ezisetiweyo, ndwendwela ku-www.aboutcookies.org okanye ku-www.allaboutcookies.org
Fumanisa ukuba zilawulwa njani iicookies kwizikhangeli ezaziwayo:
Ukufumana ulwazi olunxulumene nezinye iibrawuza, ndwendwela iwebhusayithi yonjiniyela webrawuza.
Ukuphuma ekubeni ulandelwe nguGoogle Analytics kuzo zonke iiwebhusayithi, ndwendwela http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
yenyani iminyaka 11 Le cookie isetyenziswa yiWPForms WordPress plugin. Icookie isetyenziselwa ukuvumela uguqulelo oluhlawulelweyo lweplagi ukudibanisa amangeniso ngumsebenzisi ofanayo kwaye isetyenziselwa ezinye izinto ezongeziweyo njengeFom yokuShiya iAddon.
yajongwa_cookie_ 1 kunyaka Icookie isethwe yi-GDPR Cookie Consent plugin ukugcina ukuba umsebenzisi ukuvumile na ukusetyenziswa kweicookies. Ayigcini idatha yobuqu.
_fbp iinyanga 3 Le cookie isethwe nguFacebook ukubonisa intengiso xa ikwiFacebook okanye kwiqonga ledijithali elinikwa intengiso kuFacebook, emva kokundwendwela iwebhusayithi.
fr iinyanga 3 I-Facebook iseta le cookie ukubonisa iintengiso ezifanelekileyo kubasebenzisi ngokulandela umkhondo wokuziphatha komsebenzisi kwiwebhu yonke, kwiindawo ezinepikseli ye-Facebook okanye iplagi yezentlalo ye-Facebook.
APHA Unyaka o-1 iintsuku Iicookies zikaGoogle DoubleClick IDE zisetyenziselwa ukugcina ulwazi malunga nendlela umsebenzisi ayisebenzisa ngayo iwebhusayithi ukubabonisa ngeentengiso ezifanelekileyo kwaye ngokweprofayile yomsebenzisi.
vavanyo_cookie imizuzu 15 I-test_cookie isethwe ngu-clickclick.net kwaye isetyenziselwa ukumisela ukuba ingaba isikhangeli somsebenzisi siyayixhasa na ikuki.
NDWENDWELA_INFO1_LIVE Iinyanga ze-5 zeentsuku ze-27 Icookie ebekwe yiYouTube yokulinganisa ubungakanani bebhendi egqiba ukuba ingaba umsebenzisi ufumana isixhobo somsebenzisi esitsha okanye esidala.
I-YSC iseshoni Ikuki ye-YSC isetiwe yi-Youtube kwaye isetyenziselwa ukujonga umbono weevidiyo ezifakiwe kumaphepha e-Youtube.
izixhobo ze-yt ezikude ze Ezi khukhi zisetiwe ngeevidiyo ezifakwe kwi-youtube.
yt-kude-isixhobo-id ze Ezi khukhi zisetiwe ngeevidiyo ezifakwe kwi-youtube.
_ga iminyaka 2 Ikuki ye-_ga, efakwe nguGoogle Analytics, ibala undwendwe, iseshini kunye nedatha yomkhankaso kwaye igcina umkhondo wokusetyenziswa kwesiza kwingxelo ye-analytics yesiza. Icookie igcina ulwazi ingachazwanga kwaye inikezela ngenani eliveliswe ngokungacwangciswanga ukwamkela iindwendwe ezizodwa.
_ga_QB4KJ2NX1F iminyaka 2 Le khukhi ifakwe nguGoogle Analytics.
UKUVUMA Iminyaka eli-16 iinyanga ezisi-3 iintsuku ezili-26 iiyure ezili-7 Ezi khukhi zisetiwe ngeevidiyo ezifakwe kwi-youtube. Babhalisa idatha engaziwayo yeenkcukacha-manani ngokomzekelo ukuba ividiyo iboniswa kangaphi kwaye zeziphi iisetingi ezisetyenziselwa ukudlala. ukuba ucofa "uthanda" kwividiyo.